शरणार्थीका लागि शीर्ष दस जब - निर्माण कार्यहरू र सुधार | USAHello | USAHello
शरणार्थीका लागि शीर्ष दस जब – निर्माण कार्यहरू र सुधार
निर्माण जब र सुधार ज्ञात. सिक्न तपाईं आफ्नो क्यारियर सुरु गर्न के गर्न आवश्यक के.
कुनै पनि काम?
को प्लंबर त्यहाँ समस्या हुँदा पानी आपूर्ति लाइनको स्थापना र स्थापित. तिनीहरूले पनि यस्तो Dishwashers रूपमा पानी रेखाहरू जोडिएको उपकरणहरू, फिक्स. तपाईं एक पाइपलाइन लाइसेन्स प्राप्त गर्न परीक्षण गर्न आवश्यक हुनेछ. प्रत्येक राज्य इजाजतपत्र प्राप्त गर्ने बारे फरक नियम छ.
प्रत्येक राज्य Plumbers लागि इजाजतपत्र व्यवस्था
स्वतः मिस्त्री निरीक्षण र कार मर्मत. बनाउन कार पर्याप्त तेल र अन्य तरल पदार्थ छ पक्का. केही जब मोटर वाहन टेक्नीसियन प्रशिक्षण आवश्यक.
मोटर वाहन टेक्नीसियन लागि पाठ
मदत बढईगीरी कामदारहरूको काठ र मरम्मत बनेको भवन र वस्तुहरु को निर्माण मा. , पूरा सामाग्री खाडल खनेर, र आधारभूत निर्माण गर्न. सफा उपकरण र काम गर्ने क्षेत्रको. कुनै औपचारिक शिक्षा यो काम को लागि आवश्यक छ छ.
बढईगीरी कार्यकर्ता सिक्न
निर्माण कामदारहरूको सेट अप साइटहरु जहाँ भवनहरु निर्माण गरिनेछ. सामाग्री को लोड र उतराई प्रयोग गरिने. कहिलेकाहीं, तपाईं नयाँ भवन निर्माण को लागि भवन फुकाल्नु सक्छ.
सिक्न निर्माण कार्यहरू
को Electricians व्यवसाय, घर र कारखानों लागि स्थापना र विद्युत प्रणाली को मर्मतका. यो एक धेरै खतरनाक काम हुन र इजाजतपत्र आवश्यक सक्नुहुन्छ. तपाईं बिजुली विज्ञान बारेमा थप जान्न आवश्यक. तपाईं पनि चार वर्ष एक सिकारु रूपमा काम गर्न आवश्यक छ.
कसरी बिजुली बन्न
هل تحتاج إلى شهادة الثانوية العامة؟ يمكن للبالغين في الولايات المتحدة الأمريكية إجراء اختبارات GED® أو HiSET أو TASC للحصول على شهادة الثانوية العامة. तपाईं अनलाइन वा साँझ कक्षाहरू वा सामुदायिक कलेजहरु मा परीक्षण अध्ययन गर्न सक्छौं.
तपाईं काम प्रशिक्षण कार्यक्रम कसरी पाउँछौं
CareerOneStop संग apprenticeships फेला
म के चाहियो?
तपाईं अंग्रेजी सिक्न आवश्यक छ? तपाईं आफ्नो अंग्रेजी अभ्यास गर्न आवश्यक छ भने, तपाईं कक्षाहरू वा पाठ तपाईं कहाँ बस्नुहुन्छ नजिकै अनलाइन पाउन सक्नुहुन्छ.
आफ्नो शहर मा अंग्रेजी भाषा कक्षाहरू खोजी
आफ्नो काम को लागि खोज सुरु
सरकार रोजगार केन्द्र मुक्त. सल्लाह प्रदान गर्न र स्थानीय जब सूची राख्न. तिनीहरूले CVS र व्यापार आवेदन मदत छन्. प्रशिक्षण तपाईं काम र शिक्षा लिन सक्छ.
तपाईं केन्द्र किराया निकटतम खोज्न
IHireConstruction एक विशेष वेब साइट खेत जब, मर्मत, निर्माण र मर्मत छ. तपाईं पनि यस्तो real.com र monster.com रूपमा साधारण कार्यहरु लागि खोज साइटहरु हेर्न सक्नुहुन्छ.